Ubuchwepheshe, I-Cable ne-satellite satellite
"I-Telecard" iyona i-TV enhle kakhulu ye-satellite, ngemuva kokuxhumeka uzojabulela iminyaka eminye yekhwalithi namanani amaningi. Kodwa kufika isikhathi lapho sekuyisikhathi sokuvuselela uhlu lwakho lwesiteshi, bese kukhona imibuzo ehlukahlukene.
Ngingazivuselela kanjani iziteshi ze "Telecard"? Ngokuzimela ungakwenza. Ukuze ubuyekeze uhlu lwamashaneli we-TV, kufanele usethe kabusha isamukeli kuzilungiselelo zefektri. Ngakho izovuselela futhi iqale iziteshi zokuskena. Ngeshwa, yonke imishini ihlukile, futhi udinga ukuzithuthukisa ngokwakho. Ake sibheke indlela yokuvuselela iziteshi ku- "Telecard".
Izinsiza ezivunyelwe ukusetshenziswa. Ama-EVO Receivers
Ngingazivuselela kanjani iziteshi ku- "Telecard"?
Sebenzisa okude ukuvula imenyu.
Yiya entweni "Izilungiselelo".
Ewindini elisha, iya ku- "Izilungiselelo ze-Factory" bese uqinisekisa isenzo esikhethiwe.
Okulandelayo, udinga ukungena iphasiwedi oyifake ngaphambilini. Mhlawumbe awuzange ufake iphasiwedi yakho, bese udinga ukungena ama-zero amane.
Qinisekisa izenzo zakho ngokuchofoza okuthi "Kulungile".
Ewindini elisha, khetha uhlu lweziteshi ze-TV.
Inqubo yokuskena iziteshi ze-TV izothatha cishe imizuzu engu-15, ngemuva kokuthi izenzo zivele zivele imenyu ngokuchofoza inkinobho "Phuma".
Kulesi sakhiwo, ukubuyekezwa kohlu lweziteshi ze-TV kuzofana.
Okokuqala iya kwimenyu.
Emva kwalokho, khetha "Izilungiselelo zangokwezifiso" futhi uqinisekise isenzo sakho.
Yiya kumenyu engaphansi "Hlela kabusha kuzilungiselelo zemboni" bese uqinisekisa isenzo. Njengokwesikhashana esidlule, uhlelo luzokucela iphasiwedi.
Ngemuva kwalokho, kuzo zonke amawindi aphumayo, chofoza inkinobho ethi "Kulungile".
Ekuchofozeni kokuphela kunkinobho ethi "Kulungile", emva kwalokho ungaphuma izilungiselelo.
Ezinye izinto eziphakanyisiwe
Kumpahla eyengeziwe ithatha izamukeli zezwekazi eliqinile ne "Рикор". Kulaba abamukeli, amaphuzu amane okuqala afana kakhulu, kodwa kukhona ezinye izinguquko ezengeziwe. Ngingazivuselela kanjani iziteshi ku- "Telecard"? Okokuqala siya kwimenyu, ukhethe into ethi "Izilungiselelo" bese usuka phansi kwento ethi "Izilungiselelo ze-Factory", bese ufaka iphasiwedi. Nika amandla "Usesho lweNethiwekhi". Bese sivula into ethi "Sesha iziteshi" bese ulinda. Ukusesha kuzohlala cishe amaminithi angu-20 futhi kuzothola zonke iziteshi ezidingekayo. Ekugcineni, chofoza u- "Kulungile" bese uphuma izilungiselelo.
Izinsiza ezingavunyelwe ukusetshenziswa
Uma ungatholi umamukeli wakho ohlwini lwezinto eziphakanyisiwe, ngakho-ke akunconywa ukuthi uyisebenzise no-opharetha "I-Telecard". Noma kunjalo, akuyona imishini efanelekayo engaxhunyiwe, kodwa ukulungiselelwa kuyoba okuhlukile. Ngingabuyisela kanjani uhlu lwamashaneli "kwi-Telecard"?
Vula i-receiver ne-TV, iya kwimenyu. Kufanele uhlole ngokushesha izilungiselelo zomamukeli wakho. Inkosi, lapho ixhuma iphakheji leziteshi ze-TV, ingahle ifane igama le "Telecard", kodwa sebenzisa enye i-satellite. Sidlulela ku- "Ulwazi" bese uhlola. I-Satellite yomqhubi "I-Telecard" - I-Intelsat 15 ngo-85.0 ° E ne-Express AM5 ngo-140.0 ° E. Uma ulwazi luqinisekisiwe, khona-ke ungaqhubeka nezinyathelo ezilandelayo, ngaphandle kwalokho udinga ukulungisa kabusha umamukeli. Kufanele uqonde ukuthi imishini engafanele ingase ingasebenzi ne "Telecard".
Okulandelayo, iya entweni ethi "Ukufaka" noma "Ukufaka". Ewindini elisha ungabona izikali ezimbili. Bonisa amandla nekhwalithi yokuxhumeka, uma kulungiselelwe kahle, kumele bagcwaliswe ngombala othile.
Ihlala kuphela ukunika amandla "Usesho lweNethiwekhi" bese uya ekusesheni. Emva kwalokho kuzodingeka ukuthi uqinisekise izenzo zakho. Ekuchofozeni kokuphela kunkinobho ethi "Kulungile" bese uphuma kwimenyu.
Ngingazivuselela kanjani iziteshi ku- "Telecard"? Kuhle kakhulu. Udinga kuphela ukuthola imishini yakho bese ulandela imiyalelo. Ukubuyekeza iphakheji yeziteshi ze-TV ngeke kuthathe imizuzu engaphezu kwengu-20.
Collar hook: isikimu. Openwork collar crocheted: incazelo